DKMG ah iyo Alshabaab oo Guulo ka kala sheegtay Dagaalo ka dhacay Dhoobley – SBC
DKMG ah iyo Alshabaab oo Guulo ka kala sheegtay Dagaalo ka dhacay Dhoobley
Deegaano ay ka mid tahay Degmada Dhoobley ayaa waxaa ka dhacay dagaalo xoogan oo ay isku qaadeen ciidamada DKMG ah iyo kuwa Raaskambooni oo isgarabsanaya iyo ciidamada xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Dagaaladan oo dhacay saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa ay ka kala sheegteen labada dhinac ee dagaalamay guulo iyagoona sheegtay in midba midka kale uu ugeystay khasaare gaarsiiyayna jab.
Afhayeen u hadlay ciidamada DKMG ah iyo Ururka Raaskambooni ayaa sheegay in ciidamada ay guulo ka gaareen dagaaladii ay la galeen xarakada Shabaab Almujaahidiin, waxaanu sheegay in dagaaladaasi ay ka dheceen deegaano hoosyimaada degmada Dhoobleh ee gobolka Jubada hoose .
Dhinaca kale Afhayeen u hadlay Xarakada Shabaab Almujaahidiin ayaa isna sheegay in dagaaladaasi ay xarakadu guul kaga soo hoyday dhinacyadii ay la dagaalameen, isagoona sheegay in ay dileen ciidan ay ku jireen kuwo Keenyaan ah waasida uu hadalka u dhigaye.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaaladii dhacay ay ahaayeen kuwo aad u xoogan balse aan laga warqabin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay marka laga tago sheegashada labada dhinac.
Sikastaba ha ahaatee dagaaladan ka dhacaya gobolka Jubada hoose oo ay ku suganyihiin dhinacyada DKMG ah, Ciidamada Kenya iyo Ururka Raaskambooni oo isku dhinac ah iyo xarakada Alshabaab oo iyana dhan ah ayaa noqday kuwo soo laalaabta, waxaala la xaqiijiyay in dagaaladii ugu dambeeyay ay qaadeen xarakada Shabaab Almujaahidiin.